Iyo itsva vhezheni yeVirtualBox 6.0.14 inosvika nerutsigiro rweLinux 5.3 | Linux Vakapindwa muropa
Maawa mashoma apfuura vhezheni itsva yekugadzirisa yeVirtualBox 6.0.14 yakaburitswa, iyo inouya kuzogadzirisa mashoma eetsikidzi. Kune avo vasingazive Virtualbox vanofanira kuziva izvozvo es chakanakisa multiplatform virtualization chishandiso, izvo zvinotipa mukana wekugadzira chaiwo dhisiki dhiraivha kwatinogona kuisa anoshanda system mukati meyo isu yatinowanzoshandisa.
Virtualbox inotibvumidza kumhanya chaiwo michina kure, kuburikidza neRemote Desktop Protocol (RDP), iSCSI rutsigiro. Rimwe basa raanopa nderekukwevera ISO mifananidzo seyakajeka CD kana maDVD dhiraivha, kana sedhiropidhi dhisiki.
1 Shanduko dzakakosha muVirtualBox 6.0.14
2 Maitiro ekuisa VirtualBox 6.0.14?
Shanduko dzakakosha muVirtualBox 6.0.14
Nokuburitswa kweiyi nyowani vhezheni yeVirtualBox 6.0.14 Oracle inotipa iyo yekugadzirisa vhezheni iyo inogadzirisa gumi nembiri pamwe nekutsigira kusimudzira.
Izvi ndizvo zvazviri mune iyi nyowani vhezheni yeVirtualBox akawedzera rutsigiro rweLinux 5.3 kernel, pamwe chete zvakare yakagadziridzwa kuenderana ne vaenzi masisitimu vachishandisa ruzha subsystem ALSA mu AC'97 yekuteedzera modhi.
Iwo magwaro ekugadzira rpm mapakeji eLinux mauto akavandudza kodhi yekuona Python shanduro, iyo yakagadzirisa mamwe matambudziko ekumisikidza.
Uyewo yakatarwa nyaya pamwe nechinhu kugadzirwa kwe vaenzi masisitimu mu RHEL / CentOS / Oracle Linux 7.7 uye RHEL 8.1 Beta.
Kune iyo VBoxSVGA uye VMSVGA chaiwo magrafiki adapta, nyaya nekupenya, kugadzirisazve uye kupaza kweimwe 3D mashandisirwo akagadziriswa.
Mune zvikamu zveLinux-based guest system, gadzirisa tsaona paunenge uchidana aio_read uye aio_write yemafolda akagovaniswa uye dambudziko rekudzika zvikamu zvakagovaniswa rakagadziriswa.
Iyo virtualization kodhi inogadzirisa matambudziko kana uchishanda pane masisitimu ane huwandu hukuru hwema processor uye unogadzirisa iyo bug iyo, mune zvisingawanzo mamiriro ezvinhu, yakatungamira kune yakaipa muyenzi system mamiriro kune mamwe mauto neIntel processor.
Yakagadziriswa kugadzikana kwekutumira mukana kune USB kifaa paWindows mauto.
Iyo ingangoita nyaya nekubata network adapter kubuda pane UEFI vashanyi masisitimu akagadziriswa.
Yakagadzirisa iyo VM GUI maitiro ichirovera muCatalOS macOS 10.15 inomiririra nharaunda.
Maitiro ekuisa VirtualBox 6.0.14?
Kana iwe uchifarira kugona kuisa iyi nyowani vhezheni yeVirtualBox pane ako masisitimu, unogona kuzviita nekutevera rairo dzatinogovana pazasi.
Vagadziri veVirtualBox vanotipa isu kare akavakirwa mapakeji ekuisa nyore pane yedu distro.
Kana iri iyo Debian, Ubuntu uye zvimwe zvakapihwa zvakavakirwa nerutsigiro rwe .deb mapakeji. Tiri kuenda kunotora .deb package yeiyi vhezheni yeVirtualBox 6.0.14.
Kune izvi isu tichavhura terminal uye mairi tinonyora (yeDebian uye zvichibva pane izvi):
Waita kurodha pasi kumisikidza kwayo kunogona kuitwa neyako inodiwa package maneja kana kubva kune iyo terminal na:
Uye kana paine matambudziko nezvinotsamira tinozvigadzirisa nazvo:
Zvino mune nyaya yekuda kuenderera kugashira zvigadziriso, isu tinokwanisa kuwedzera iyo yekushandisa repository kune yedu system. Isu tinoita izvi nekuita mune in terminal:
Waita izvi izvozvi Tinofanira kuwedzera ruzhinji rwePGP kiyi kubva kune chaiyo VirtualBox mapakeji repositi kune system.
Zvikasadaro, isu hatizokwanise kushandisa iyo chaiyo VirtualBox package repository. Kuti uwedzere ruzhinji rwePGP kiyi kubva kune chaiyo VirtualBox package repository, mhanya unotevera kuraira:
Panguva yeavo vari Fedora, RHEL, vashandisi veCentOS, isu tinofanirwa kuita zvinotevera, ndiko kurodha pasuru ne:
Kana iri Iyo OpenSUSE 15 package yeako system ndeiyi:
Mushure meizvozvo tinonyora:
Iye zvino kuti uone kuti kumisikidza kwaitwa:
Panyaya yeArch Linux, unogona kuisa kubva kuAUR, kunyangwe mamwe masevhisi achida kupihwa Systemd, saka zvinokurudzirwa kuti ushandise iyo Wiki kuti ugone kuisa.
Seimwe nhanho yekuwedzera tinogona kuvandudza mashandiro eVirtualBox Nerubatsiro rwepakeji, pasuru iyi inogonesa VRDP (Virtual Remote Desktop Protocol), inogadzirisa dambudziko nechisarudzo chidiki icho VirtualBox inoita uye zvimwe zvakawanda zvinogadziridzwa.
Kuti uise iyo, mhanya unotevera mirairo:
Isu tinobvuma iyo mamiriro uye mamiriro uye nekuisa iyo package.
Kuti uone kuti yakaiswa nenzira kwayo:
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Linux software » Iyo itsva vhezheni yeVirtualBox 6.0.14 inosvika nerutsigiro rweLinux 5.3
Jose Luis Mateo akadaro
MuLinux Mint, hapana kana
Pindura José Luis Mateo